डेटिङ गएकी युवतीले अ’पहरणमा परेको बहाना बनाएपछि जे भयो त्यो सुनेर छक्क पर्नुहुनेछ ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/डेटिङ गएकी युवतीले अ’पहरणमा परेको बहाना बनाएपछि जे भयो त्यो सुनेर छक्क पर्नुहुनेछ !
डेटिङ गएकी युवतीले अ’पहरणमा परेको बहाना बनाएपछि जे भयो त्यो सुनेर छक्क पर्नुहुनेछ !
अभिभावकलाई छलेर डेटिङमा जानेहरु धेरै हुन्छन् तर भारतकी एक युवतीले भने प्रेमीसंग घण्टौ डेटिङमा रहेको बताउन नसकेर अभिभावकलाई आफू अ’पहरणमा परेको बाहान बनाएको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । जसका कारण प्रहरी प्रशासन सहित अपरा’ध शाखामा समेत हंगामा भएको थियो । भारतको नागपुरकी २१ बर्षिय एक युवती आफ्नो प्रेमीसँग लामो समय डेटिङमा थिइन् ।
ढिलो घर पुगेपछि परिवारका सदस्यले उनलाई ढिलो आउनुको विषयमा केरकार गर्न थाले । उनले आफू डेटिङमा रहेको बताउन सकिनन् र आत्तिदै कलेजबाट फर्कदा चारजना पुरुषको समुहले अ’पहरण गरेको र त्यहाँबाट भा’ग्न सफल भएको बताइन् ।
युवतीका परिवारजनले तत्काल गिट्टीखदान प्रहरी चौकिमा छोरी अपह’रणमा परेको निवेदन दिए । युवती अप’हरणमा परेको निवेदन परेपछि प्रहरीले बेलुकी ८ बजेबाट हरेक नाकामा प्रहरीले सक्रियता बढायो । तर अप’हरणकारीको कुनै सुराक पत्ता लगाउन सकेन । अब प्रहरीलाई युवतीमाथि नै शं’का भयो । तब उनीहरुले कलेजका आसपासमा रहेको सीसीटिभी फुटेज जाँच गरे । जहाँ युवती एक युवकका साथ मोटरसाइकलमा सवार भइ गएको देखियो ।
जब सीसीटिभी फुटेज बाहिरियो तब मात्र युवतीले अप’हरणमा परेको कहानी झुटो भएको स्वीकारिन् । प्रहरीका अनुसार उनी कलेजबाट आफ्नो प्रेमीका साथ डेटिङ गएकि थिइन् । डेटिङमा लामो समय बिताएपछि उनका प्रेमीले ती युवतीलाई घरअघि सम्म पुर्याएका थिए । यसरी घण्टौ डेटिङमा रहेको कारण परिवारजनले गाली गर्ने भन्दै त्यसबाट बच्न उनले आफू अपह’रणमा परेको झुटो कहानी सुनाएकी थिइन् ।
आमिर खानले जन्माएका थिए अरुको कोख भाडामा लिएर बच्चा आमिर खानले जन्माएका थिए अरुको कोख भाडामा लिएर बच्चा